Silungisa iHolo yoBukumkani
IBhayibhile ithetha ngeendidi ezimbini zamadoda angamaKristu anyamekela iimbopheleleko zebandla—“abaveleli nezicaka zolungiselelo.” (Filipi 1:1) Ngokuqhelekileyo la madoda akho kwibandla ngalinye. Yintoni eziyenzayo izicaka zolungiselelo ukuze zisincede?
Zincedisa iqumrhu labadala. Enoba ziselula okanye sele zikhulile ngeminyaka, izicaka zolungiselelo ngamadoda aqolileyo ngokomoya, athembekileyo nakhutheleyo. Zenza imisebenzi yebandla ebalulekileyo edla ngokufuna amandla nexesha ukuze izinto zihambe ngocwangco. Oku kubangela ukuba abadala banikel’ ingqalelo ekufundiseni nasekwaluseni.
Zenza izinto ezahlukahlukeneyo. Ezinye izicaka zolungiselelo zabelwe ukwamkela abantu abafikayo ezintlanganisweni. Ezinye zinyamekela isandisi-lizwi, iincwadi, zigcina ingxelo yemali yebandla, zize zabe amaqela entsimi. Zincedisa nasekulungiseni iHolo yoBukumkani. Abadala basenokuzicela ukuba zincede abakhulileyo. Indlela eziyiphumeza ngayo imisebenzi eziyinikwayo ibangela ukuba zihlonitshwe libandla.—1 Timoti 3:13.
Zimisela umzekelo omhle njengamadoda angamaKristu. Izicaka zolungiselelo zimiselwa ngenxa yeempawu zazo zokomoya ezintle. Xa ziseqongeni, zomeleza ukholo lwethu. Xa zikhokela kumsebenzi wokushumayela, zibangela ukuba sibe nenzondelelo engakumbi. Ngenxa yendlela ezisebenzisana ngayo nabadala, zisenza sivuye yaye simanyane. (Efese 4:16) Ekuhambeni kwexesha, nazo zisenokuba ngabadala.
Izicaka zolungiselelo ngamadoda anjani?
Zilinceda njani ibandla lisebenze ngokutyibilikayo?
Suku ngalunye usiya kwiHolo yoBukumkani, zama ukubazi abadala nezicaka zolungiselelo neentsapho zazo.